Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း)
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Neostigmin သည် အင်ဇိုင်းကို တားမြစ်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားမျာတွင် အာရုံကြောစနစ်များကို ကောင်းမွန်လာစေပြီး ကြွက်သားများကို အလုပ်ပို လုပ်နိုင်စေပါသည်။
Neostigmin ကို များသောအားဖြင့် ကြွက်သားအားနည်းသောရောဂါတွင် အသုံပြုပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်များအရ အခြားသော ကျန်းမာရေးပြသနာများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Neostigmin ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သို့မဟုတ် ဆေးညွှန်းအတိုင်း အစာနှင့် ဖြစ်စေ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေ သောက်နိုင်ပါသည်။
အစာနှင့်သောက်ပါက အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေပိုနည်းစေပါသည်။ မသိလျှင် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Neostigmin ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Neostigmin ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Neostigmin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Neostigmin ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Neostigmin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်မီ အောက်ပါအချက်များကို သိထားသင့်ပါသည်။
Neostigmin သည်မူးဝေခြင်း၊ မျက်စိအမြင် မှုန်ဝါးခြင်း၊ မိုက်ခနဲဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေစဉ်တွင် ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားများနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း နှင့် အခြားသော အလုပ်များကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။
Neostigmin ကို အခြားသော ဆေးများနှင့် တွဲသောက်ခြင်း၊ အရက်နှင့် တွဲသောက်ခြင်း၊ သူ့တမျိုးတည်းသောက်ခြင်းသည် ကားမောင်းခြင်းနှင့် အခြားအန္တရာယ်များသော အလုပ်များကို ဘေးဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
ထို့ပြင်သင်သည် Neostigmin သောက်နေလျှင် ဆေးကုသမှုများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ၊ သွားနှင့် ခံတွင်းကုသမှုများ မခံယူမီတွင် ဆရာဝန်အားပြောပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Neostigmin ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
သည်မိခင်နို့ရည်ထဲတွင်ပါဝင်မှုရှိမရှိနှင့် ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိမရှိ မသိရသေးသောကြောင့် သင်သည်နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်ပါက Neostigmin ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ မသောက်ရပါ။
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း(အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်)
ကြွက်သားများ တဖြေးဖြေး အားနည်းလာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Neostigmin ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် Neostigmin နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများဖြစ်ပါသည်။
မေ့ဆေးများ (e.g., cyclopropane)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Neostigmin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Neostigmin ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် လူကြီးများသည် တနေ့လျှင် 15 mg မှ 375 mg လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သူများတွင် ထိုပမာဏထက် ပိုလိုအပ်နိုင်သော်လည်း ဆေးလွန်သွားခြင်းများဖြစ်တတ်ကြောင်း အထူးသတိထားရပါမည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် Neostigmin ဆေး ၁၀ ပြားလျှင် 150 mg ပါဝင်ပြီး ယင်းပမာဏကို ၂၄ နာရီအတွင်းတိုက်ရပါသည်။ ဆေးတကြိမ်နှင့် တကြိမ်ကြားတွင် ခြားထားသော အချိန်အတိုင်းအတာသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော် ဆေးအညွှန်းများသည် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားမှုရှိပါသည်။
ဆေးကုထုံးကို နေ့ရောညပါ ခံယူရမည်ဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် လူနာက ပို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သော အချိန်များ(ဥပမာ- နေ့လည်၊ အစာစားပြီးချိန်များ)တွင် ဆေးပမာဏကို ပိုပေးရပါသည်။ ထို့နောက် ဆရာဝန်က လူနာ၏ နေ့စဉ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းများကို ကြည့်ပြီး ဆေးအတိုးအလျှော့လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်များအတွက် Neostigminနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျစိတ်ချရသောဆေးပမာဏများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသာ Neostigmin ကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
Neostigmine (နီရိုစတစ်ဂ်မင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Neostigmin ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေးအရည် 0.5 mg/ml (1 ml, 10 ml)
သောက်ဆေးပြား 15 mg
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာအရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Neostigmin ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Neostigmine.https://www.drugs.com/cdi/neostigmine.html.Accessed November 10, 2016
Neostigmine.https://www.drugs.com/ppa/neostigmine.html.Accessed November 10, 2016
Priostigmin.http://www.rxlist.com/prostigmin-drug.htm.Accessed November 10, 2016.